Monopoly Live - Ntuziaka na nyocha - site website - jluis37.com
Monopoly Live – Ntuziaka na nyocha – site website
Monopoly Live bụ egwuregwu bọọdụ 3D, na egwuregwu cha cha na-ere ahịa na-esi na nka nke Evolution Gaming. Ọ na-etinyere gburugburu a nnukwu spinning self indulgent wheel mejupụtara 7 dị iche iche agba. Ebuputa ihe ga – esi na nsị pụta iji nweta ọtụtụ ihe mmeri d e egwuregwu egwuregwu.
Ọ bụrụ na Monopoly Live bụ ụdị tii gị, nwee anya Crazy Time Guide Id Review na Stake.com.
Ebe a t – akpọ Wheel Money dịn’etiti ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ otu n’ime ndị egwuregwu egwuregwu mara mma na-agba ya gburugburu maka egwuregwu ọ bụla. Mazị Monopolyn’onwe un nọn’ochen’akụkụ aka ekpe nke ụlọ ọrụ ahụ ma gụọ akwụkwọ akụkọ ka ọ na-echere mmalite nke isi ihe – egwuregwu bonus. N’aka nri ya, ndị egwuregwu nwere ike ịhụ igwe eji ọla edo rụọ, nke arụ ọrụ dị ka atụmatụ onyinye.
Ejiri akụkụ asaa dị na wiil ahụ, mana ndị egwuregwu nwere ike ịkụnye self ha na ụdị 6. Tebụl dịn’okpuru na-egosi nhọrọ ịkụ nzọ niile yana nkwụnye ụgwọ ndị metụtara:
Youtskwụ ụgwọ na Ebumnuche Egwuregwu
Ebumnuche nke Evolution Gambling nke Monopoly Live bụ ka onye ọkpụkpọ ahụ buo amụma nke ọma akụkụ nke na wiil nke flappern’elu ga-akwụsị na. A na-eme ka ndị niile na-agba ọsọ na ngalaba nke wiil ahụ kwụsịrị mgbe ọ na-atụle ụgwọ ọrụ ikpeazụ. Otu egwuregwu nwere ike ịnweta naanị otu mmeri, ma a na-akwụ ndị na-etinye ego na ngalaba mmeri mmeri.
Tupu mmalite nke agba ọhụrụ, ndị egwuregwu niile nwere sekọnd 15 ka ha tinye nzọ ha. Mgbe oge ịkụ nzọ ahụ gafere, onye na-akwado un na-atụgharị wiilị ahụ websiten’aka ekpe ma ọ bụn’akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ. A na-eme nzo website t ịhọrọ mgbawa kwesịrị ekwesị ma tinye ya na otu ma ọ bụ karịa nke mpaghara agụpụtara na-agbapụta na ala nke ihuenyo ahụ. A nzọ na niile awa nhọrọ dị ka nke ọma.
Igwe anwansi nwere oghere ohere nke dị iche d e ngalaba ndị ọzọ. Ọ bụrụ na flapper akwụsị na oge, ihe abụọ nwere ike ime:
Ndị na-egwu egwu na-enweta ihe nrite ego na-enweghị atụ nke agbakwunyere d e ngụkọta ha, wee nyeghachi ha ego ego. Nzọ nzọ mbụ niile na-adịgide ebe onye na-akwado un na-atụgharị wiil ahụn’oge nke abụọ. Onye na-aba ụba na-amụba mmeri niile na ntụgharị nke abụọ. Ka emails were na ntụgharị nke abụọ na-akwụsị na ngalaba Chance ọzọ, ndị egwuregwu miniature merie onye na-abawanye ọzọ. N’okwu ahụ, a ga-amụba ọtụtụ nke abụọ na nke mbụ mgbe ị na-agbakọ mmeri.
Nzọụkwụ kacha nta bụ $ 0.10 / gburugburu, ebe kachasị dị t $ 5.000. Pasent RTP dabere na akụkụ nke wiil ahụ nzọ ahụ nọ na ya. Ihe kachasị mma bụ 96.23 percent.
Egwuregwu bonus nwere ike ịkpalite naanị ma ọ bụrụ na flapper na wiil ahụ kwụsị na ngalaba two ma ọ bụ mpịakọta 4. Mgbe nke ahụ only, Maazị Monopoly ga-ewepụ akwụkwọ akụkọ un adorable gawa ụwa mara mma na-anọchite anya mbido mbụ nke Monopoly. Nkwụsị ndị dị na bọọdụ ahụ nwere nhazi ihe eji eme ihe. Ndị na-egwu egwu nwere ike ịhụ ihe dị iche iche, dịka ụlọ, ụlọ oriri d e ọ,ụ hotelsụ, okporo ụzọ, ụtụ isi, ebe a na-adọba ụgbọalan’efu, ụlọ mkpọrọ, wdg.
A daashi gburugburu na-amalite website a mpịakọta nke dais. The dais ga-akpọrepu ma two ma ọ bụ 4 ugboro, na-adabere ma ọ bụrụ d e ndị wheel kwụsịrị t two Na-apụta ma ọ bụ 4 Na-apụta. Mgbe ọ bụla mpịakọta, Mr Monopoly na-aga ngụkọta nchikota nke abụọ dais na-anakọta iche iche nwa anụmanụ na multipliers.
Ọ bụrụ na igwe luru tụgharịa otu ọnụọgụ abụọ (ọnụọgụ abụọ), a ga-enye onyinye mpịakọta dice ọzọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na Mr Monopoly gaa mkpọrọ, a ga-enwerịrị okpukpu abụọ iji wepụta un ma gaan’ihu na usoro self ahụ.
E wezụga ndị na – eme ọtụtụ ihe, ụlọ ọrụ Monopoly nwere ntụpọ ole d e ole ọzọ ekwuru. E nwere Ohere na Community Chest na-akwụ ndị na-egwu egwu ụgwọ ego. Ọ bụrụn’ịbanye na ngalaba Revenue Tax ma ọ bụ Supertax, a ga-ewepụ 10 percent ma ọ bụ 20% na mmeri gị na mmeri gị niile. Ọ bụrụ na Mr Monopoly na-agba ọsọ niile, ndị na-amụba ihe niile na bọọdụ ga-abụ okpukpu abụọ na 1000x kachasị elu. Ozugbo emechara ihe niile ahụ, a ga-agụta ụgwọ ọrụ ma kwụọ ha ụgwọ.
Evolution Gaming t reside Monopoly bụ egwuregwu Dream Catcher Edition egwuregwu na-atọ ụtọ ndịna-emeputa na nnukwu mmeri ikike. Ọ bụ obere egwuregwu volatility dị na Stake.com kemgbe mmalite nke 2019. Egwuregwu cha cha that a na-ere ahịa na-ebi ndụ nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe karịrị $500.000 kwa ntụgharị ma dabara adaba maka desktọọpụ, mkpanaka, na mbadamba nkume. Websiten’inweta onyinye self explanatory t ịba ụba na-enweghị atụ, ndị egwuregwu nwere ọmarịcha ohere iji ihu ọchị laan’ụlọ.